रियल सेक्टरलाई पूँजीबजारमा ल्याउन अझै जोखीम : डा. कार्की | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर रियल सेक्टरलाई पूँजीबजारमा ल्याउन अझै जोखीम : डा. कार्की
मुख्य खबर, समाचार5views
रियल सेक्टरलाई पूँजीबजारमा ल्याउन अझै जोखीम : डा. कार्की
काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारमा रियल सेक्टरलाई भित्र्याउन र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा जारी गर्ने ऋणपत्र (बोण्ड)लाई बजारमा ल्याउन जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को शनिवार राजधानीमा भएको २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनीहरूले त्यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
पछिल्लो समय नेप्सेले समेत शेयरबजारमा सरकारी कोषहरू, उद्योगलगायत क्षेत्रलाई पूँजीबजारमा समावेश गर्न गृहकार्य गरिरहेकै बेलामा यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नसमेत सरोकारवालाहरूले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पूँजीबजारलाई थप विस्तार गर्न सरकारले रियल सेक्टर र यस्ता बोण्डलाई भित्र्याउनमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले भने रियल सेक्टरलाई पूँजीबजारमा ल्याउन अझै जोखीम भएको टिप्पणी गरे । तर, ल्याउनमा भने आफ्नो सहमति भएको पनि बताए । उनले भने, ‘नेप्सेको संरचनामा भने अझै सुधारको आवश्यकता छ ।’
नेपाल ब्रोकर सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले अहिले अनलाइन ट्रेडिङ छिटो ल्याउन जोड गरिए पनि यसलाई ल्याएर मात्र नहुने बताए । ‘बरु यसको कारोबारका लागि आवश्यक औजारको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपालमा ऋणपत्रको कारोबारलाई अब प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘बजारमा बेलाबेलामा हुने क्रेडिट क्रञ्च तथा तरलताको अभावमा ब्याजदर उतारचढाव हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायीलाई परेको छ । डेप्थ बजार ल्याइएमा ब्याजदर नियन्त्रण भई तरलताको अभावमा पूँजीबजारमा पर्ने प्रभाव कम हुनसक्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नेपालको समग्र पूँजीबजारका लागि आधुनिक प्रविधि प्रणाली अनलाइन ड्रेडिङ जरुरी भएको औंल्याए । यसका लागि छिटो पहल गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । हाल मार्जिन लेण्डिङका लागि भएको गृहकार्यमा सेवाबापत लगानीकर्तालाई करीब १ सय ५० प्रतिशतको कर्जा जोखीम दिन नहुने उनको तर्क छ । उनले यसमा पुनर्विचार गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध पनि गरे ।
नेप्सेको मुनाफा घट्यो
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू. ४७ करोड ४९ लाख ६१ हजार नाफा गरेको नेप्सेले आव २०७३/७४ मा रू. ३७ करोड २० लाख ८६ हजार खुद मुनाफा गरेको छ ।
नेप्सेका अनुसार शेयर दलाललाई दिइँदै आएको कमिशनमा कटौती गरिएकाले मुनाफामा कमी आएको हो । यसअघि ब्रोकर कम्पनीलाई दिँदै आएको कमिशनमा ३० प्रतिशतको कटौती भएपछि नेप्सेको मुनाफा घटेको हो । यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर दलाल कम्पनीलाई शेयर कारोबारबापत दिइँदै आएको कमिशनमा अत्यधिक कटौती गरेकाले पनि नेप्सेको मुनाफा घटेको नेप्सेको भनाइ छ ।
नेप्सेले गत आवमा रू. ४६ करोड ७८ लाख २३ हजार धितोपत्र कारोबारबाट आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो आवमा उक्त आम्दानी रू. ६९ करोड ६१ लाख ९४ हजार थियो । गत आवमा १ सय १ ओटा सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गरेर रू. ५९ अर्ब ३९ करोड ५४ लाखबराबरको पूँजी परिचालन गरेको थियो ।
यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आव २०७२/७३ मा १ खर्ब ६३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । आव २०७३/७४ मा रू. २ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोडबराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २४ दशमलव ९० प्रतिशत बढी हो ।
५० प्रतिशत नगद लाभांश
आव २०७३/७४ सम्मको सञ्चित नाफाबाट नेप्सेले ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । नेप्सेको ३६औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदका अनुसार साधारणसभाले रू. १५ करोड लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार सरकारलाई कुल लाभांशको ५८ प्रतिशत अर्थात रू. ८ करोड ७० लाख, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई कुल लाभांशको ३५ प्रतिशत अर्थात रू. ५ करोड ३५ लाख र एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई ६ प्रतिशत अर्थात् रू. ९० लाख मुनाफा जाने छ । नेप्सेमा सरकार, राष्ट्र बैङ्क र एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कसहित केही शेयर दलालको शेयर रहेको छ ।
उत्कृष्ट कारोबार गर्नेमा अनलाइन सेक्यूरिटिज सम्मानित
गत आवमा धितोपत्र बजारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गरेबापत नेप्सेले अनलाइन सेक्यूरिटिज प्रालिलाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा नेप्सेका अधिकृत सुदर्शन उपाध्याय र बद्रीराम अधिकारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित नेप्से कर्पोरेट बुल्स रेसका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो ।